LEGO အသစ်စက်စက် CITY 2021 အစောပိုင်း LEGO.com မှာရရှိနိုင်အစုံ
29 / 12 / 2020 29 / 12 / 2020 Chris Wharfe 1815 Views စာ0မှတ်ချက် 2021, 60275 ရဲတပ်ဖွဲ့ရဟတ်ယာဉ်, 60276 ရဲအကျဉ်းသားပို့ဆောင်ရေး, 60277 ရဲကင်းလှည့်လှေ, 60279 မီးဘေးအန္တရာယ်ထရပ်ကား, 60280 မီးသတ်လှေကား, 60281 မီးဘေးကယ်ဆယ်ရေးရဟတ်ယာဉ်, 60282 မီးသတ်စစ်ဌာနချုပ်ယူနစ်, 60283 အားလပ်ရက် camper ဗန်, 60284 Roadwork Truck ကား, 60285 အားကစားကား, 60286 သဲသောင်ပြင်ကယ်ဆယ်ရေး ATV, 60287 ထွန်စက်, 60288 လူမျိုး Buggy Transporter, 60289 Airshow ဂျက် Transporter, 60290 စကိတ်စီးခြင်းပန်းခြံ, 60291 မိသားစုအိမ်, 60292 မြို့စင်တာ, 60304 လမ်းမကြီးပြား, 60305 ကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, 60306 စျေးဝယ်လမ်း, City, Lego, LEGO.com
အဆိုပါ Lego အုပ်စုသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ၁၈ ခုဖြန့်ချိခဲ့သည် Lego CITY အပါအဝင်၎င်း၏အွန်လိုင်းစတိုးပေါ်တွင်အချိန်ဇယားကိုရှေ့ဆက်သတ်မှတ် 60292 မြို့စင်တာ နှင့် 60304 လမ်းမကြီးပြား.
အသစ်နှစ်ဆယ် Lego CITY အစုံသည် ၂၀၂၁၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်တွင်စတင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုမော်ဒယ်လ်နှစ်ခု မှလွဲ၍ အားလုံးမှာယူနိုင်ပါပြီ LEGO.com။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကြိုတင်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်စောစောစီးစီးလမ်းပြားသစ်ပေါ်တွင်သင်၏လက်ကိုရယူနိုင်သင့်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ဗြိတိန်ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကန့်သတ် သို့သော်) ။
ဤတွင် 2021 ၏စာရင်းအပြည့်အစုံပါပဲ Lego CITY မှာလက်ရှိရရှိနိုင်အစုံ LEGO.com:
နှစ် ဦး ထက်ပိုစုံ 60305 ကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး နှင့် 60306 စျေးဝယ်လမ်း, ဇန်နဝါရီလ 1 ရက်နေ့တွင်စတင်ရန်ရှိသေးသည်။ သို့သော်သင်၏ဘွတ်ဖိနပ်များကိုဖြည့်စွက်ရန်များစွာရှိသည် - partသင်ရှာတွေ့မည့်လမ်းပြားအသစ်များ၏ခေါင်းစီးအပိုဆောင်းကိုစမ်းသပ်လိုပါကကြည့်ပါ 60290 စကိတ်စီးခြင်းပန်းခြံ, 60291 မိသားစုအိမ်, 60292 မြို့စင်တာ နှင့် (အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်) 60304 လမ်းမကြီးပြား.
← အဆိုပါ LEGO မူရင်းသစ်သား Minifigure ကောင်းသောအဘို့သွားပြီ
LEGO Technic 2021 မှာယူနိုင်ပါပြီ →